www.xamarcade.com » WAX TARKA LIIN DHANAANTA faa iidooyinka ay leedahay bal aqri faa iidooyinkeeda
WAX TARKA LIIN DHANAANTA faa iidooyinka ay leedahay bal aqri faa iidooyinkeeda
liin dhanaantu waa midho ka mid ah khudaarta oo ka tirsan qoyska liinta. Liin dhanaantu waxay caan ku tahay dhadhankeeda dhanaanka ah iyo biyaha asiidha badan ee laga helo midhaheeda. Geedka liin dhanaantu waa mid waligiis cagaar ah oo ka dherer gaaban geedaha kale ee liinta.
Faa’idooyinka laga helo isticmaalka liin dhananta.
liin dhanaantu waxay yaraysaa hoos u dhigtaa acidka jidhka
Liin dhanaantu waxay caawisaa shaqada beerka, waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah, sida aashitada uriik “Uric Acid”, waxay kaloo mishaa dacarta, sidaas daraadeed waxaa lagu taliyaa in qofka uu subaxii hore cabo biyo liin dhanaan oo qandac ah si beerka u nadiifismo.
Liin dhanaantu waxay nadiifisaa mindhicirrada, waxay kordhisaa dubaaxinta mindhicirrada si ay jirka uga saaraan waxa mindhicirrada ku dhex jiro, waxay kaloo la dagallantaa gooryaannada caloosha ku jiro sida tuunta oo kale,
Liin dhanaantu waxaa aad ugu badan fitamiin C-ga, fitamiinkaan oo xoojiyo difaaca jirka lana dagaallamo infekshanka ay feyrasyadu keenaan sida Hergabka iyo Ifilada,
liin dhanaantu waxay qurxisaa wajiga.
Liin-dhanaantu waa jeermis dile awood buuxa leh, waxay la dagaallantaa caabuqa bakteeriyada iyo fayrasyada qaar oo ay ku samayso waxa loo yaqaano “inactivation”
Liin dhanaantu waxay wanaajisaa aragga, iyadoo daawo u ah xanuunada ku dhaca shabakadda isha ee “Retina” waxaana la ogaaday inay sabab u tahay maado liin dhanaanta ku jirto oo loo yaqaano “Rutin”.
Liin dhanaanta waxaa ku jiro aashitada loo yaqaano “Citric acid” tan oo jirka ku caawiso inay misho ama dhalaaliso dhagaxaanta ku samaysmo xameetida iyo kilyaha, dadka ay ku soo laalaabtaan dhagaxaanta kilyaha iyo xameetida waxaa lagu booriyaa inay cunista liin dhanaanta joogteeyaan.
share share si asxaabta kale uga faaido
like page Dhakhtarka Weydii